China N'ụlọ oche System rụpụta na Factory | Yi'an
mobile prefab ígwè akpa ụlọ maka hotel ma ọ bụ wor ...
Tainlọ Mbupu xgbọ Mbupu
Aluminom magnesium manganese ala vetikal elu igwe
Ulo a gwakọtara ọnụ bụ ngwaahịa nke Wiskind mepụtara iji gboo mkpa nke ụlọ siri ike. A na-etinye ngwaahịa ahụ na nrụpụta ihe owuwu n'oge oge a na-ewu ya, ma na-arụ ọrụ na mmekorita ya na ihe ndị ahụ na-arụ ọrụ iji buru ibu ọrụ ahụ, si otú a nwee ike inye egwuregwu zuru oke na nchara na ihe ndị ahụ. Ọ na-enweta uru nke ịdị arọ dị mfe, ike dị elu, ike siri ike, nrụpụta dị mfe, nrụpụta nrụpụta nke nrụpụta, na ndị ọzọ.
A na-akpụzi oche ala (oche ígwè, ụlọ efere e ji ígwè rụọ) site na mpịakọta nke mpempe akwụkwọ ígwè, na akụkụ obe ya bụ nke V, nke U, trapezoidal ma ọ bụ nke yiri ya. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka ndebiri na-adịgide adịgide. , A pụkwara ịhọrọ maka nzube ndị ọzọ. Jikọtara n'ala, n'ala oche, ígwè oche, profaịlụ ígwè efere, n'ala osisi, ígwè n'ala oche, jikọtara n'ala osisi, galvanized ígwè oche, galvanized n'ala osisi, kpaliri ala oche, jikọtara n'ala oche, Nchikota Ft slabs, n'ala ígwè oche, ewu profiled efere ígwè, mbadamba ala dị iche iche, wdg.
1. Iji mezuo ihe achọrọ nke ngwa ngwa ngwa ngwa nke isi ígwè, ọ nwere ike inye ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'oge dị mkpirikpi, ọ nwere ike ịnabata usoro iwu nke ịtọba efere efere profaịlụ n'ọtụtụ ala na ịwụsa slabs na akwa.
2. N'ebe eji ya eme ihe, a na-eji oche ala dị ka ogwe osisi nchara nke ala simenti, nke na-emekwa ka ihe siri ike nke ala ma chekwaa nchara na nchara.
3. Ọdịdị elu nke slab profaịlụ na-eme ka ikike njikọta kachasị dị n'etiti okpukpu ala na ihe nkedo, nke mere na ha abụọ na-etolite n'ozuzu ya, na ọgịrịga siri ike, nke mere na sistemụ akwa ala nwere ikike dị elu.
4. N'okpuru ọnọdụ cantilever, a na-eji akwa ala dị ka ndebiri na-adịgide adịgide. Enwere ike ikpebi ogologo nke cantilever dabere na njirimara akụkụ obe nke okpukpu ala. Iji gbochie nkedo nke efere na-agbanwe agbanwe, ọ dị mkpa iji kwado nkwado ahụ na nkwenye na-adịghị mma dịka atụmatụ nke engineer nhazi.
Ihe Nkeji Ọkpụrụkpụ .Dị
Profaịlụ profaịlụ kg / m ² 0.81.01.2 8.7210.9013.08 51.6464.5577.50 16.5620.7024.82
Oge nke Inertia cm⁴ / m 0.81.01.2 9.0811.3513.62 51.9070.6081.89 16.8622.2228.41
Oge Nkebi Nguzogide cm³ / m 0.81.01.2 10.4513.0815.70 127.50158.20190.10 33.3441.6950.04
Obosara nke Ọma mm - 720 600 600
Profaịlụ profaịlụ n'arọ / m ² 0.81.01.2 11.6314.5417.45 12.3115.3918.47 13.6317.0420.44
Oge nke Inertia cm⁴ / m 0.81.01.2 73.2091.50109.20 98.60123.25147.90 89.34111.13132.70
Oge Nkebi Nguzogide cm³ / m 0.81.01.2 14.8118.5222.22 22.4128.0133.61 18.9823.6228.24
Obosara nke Ọma mm - 510 540 720
Nke gara aga: Cleanroom Uwe mkpuchi kabinet
Osote: 360 Celsius occlusion 470 sistemụ ụlọ